Los Angeles မြန်မာ ၅၂၅၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » Los Angeles မြန်မာ ၅၂၅၄
Los Angeles မြန်မာ ၅၂၅၄
Posted by kai on Jul 10, 2011 in U.S. News | 11 comments
ကယ်လီဖိုးနီးယားနေ မြန်မာလူဦးရေ သန်းကောင်စာရင်း ထွက်လာပါပြီ..။
ကယ်လီဖိုးနီယား ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ ၁၇၉၇၈ ယောက်နေထိုင်နေပြီး.. လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ မြန်မာ ၅၂၅၄ယောက်နေပါတယ်တဲ့..။
အောက်မှာ တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့.. ကောင်တီအလိုက် အသေးစိတ်စာရင်းပါ..။
တကယ်တော့ .. သင်္ကြန်ပွဲတပွဲမှာတောင်..( လူအများဆုံးနှစ်မှာ) လူ ၄ထောင်ကျော်လာတာမို့ … မြန်မာဦးရေ ဒီထက် အများကြီးပိုမယ် ထင်မိပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့.. မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးအကျယ် လူမျိုးခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုဒဏ်ရာတွေကြောင့်.. မြန်မာ့ရေကိုသောက်. …မြန်မာလေကိုရှုမွေးလာသူတွေ အားလုံးက..မြန်မာလို့ အမည်မခံလိုကြပါဘူး..။ ကိုယ့်အိုင်ဒတတီကိုဖျောက်လို့.. အမေရိကန်..ဒါမှမဟုတ်.. ချိုင်းနီးစ်..ဒါမှမဟုတ်.. အိန္ဒိယန်းလို့သာ အမည်ခံလိုခဲ့ကြတာပါ..။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြန်မာ ငါးထောင်နှစ်ရာ ငါးဆယ့်လေးယောက်လို့သာ မှတ်ကြပါစို့နော..။
County Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, Santa Barbara, Ventura
Burmese 5254, 855, 215, 440, 1077, 17, 110
2010 Census_Asian Categories for Southern California
ဗျို့ သူကြီး… ကျွန်တော် မူလတန်းတုန်းက သန်းခေါင်စာရင်းလို့ သင်ယူခဲ့ဘူးတယ်..
သန်းကောင်နဲ့သန်းခေါင် ဘယ်ဥစ္စာမှန်တုန်းဗျ…
မောင်မိုးညို တို့ လဲ ၁၉၇၀ လောက်က လုပ်ခဲ့ တဲ့ လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်ပထမဆုံး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပွဲမှာ တပျော်တပါးပ်ဝင်လုပ်အားပေးခဲ့တာမှတ်မိပါတယ်။ အရမ်းသန်းညွန့်လို့ နံမယ်ကြီးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ရဲ့ တပည့်တယောက်က ဦးစီးလုပ်တဲ့ ကိစ္စကို အမျိုးသားရေးကိစ္စဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်မကြီးနဘေးက ရုံးကြီးဟာ သန်းခေါင်စားရင်းမှတ်တမ်းများသိုမှီ ရာ ဌာနကြီးအဖြစ် စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကနေ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ လူဝင်မှုကြိကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် သီးခြားခွဲထွက်လာတာဒီနေ့အထိပါဘဲ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး၊၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုဖြစ်ပေါ်တို့တက်မှုတွေအားလုံးရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ဟာ အဲ့ဒီ သန်းခေါင်စာရင်ျးတွေကအခြေခံထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်မှာ သန်ဒခေါင်စာရင်းကောက် ဖို့ အမတ်အချို့က လူစွမ်းကောင်းလုပ်တင်ကြပေမဲ့၊ အသစ်ဂျပ်ဂျွတ်တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်က လိမ္မာပါးနပ်စွာပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အံ့သြကုန်နိုင်ဘွယ်ပါဘဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာတော့သန်းခေါင်စာရင်းဟာ အသက်တမျှအရေးကြီးလို့ အခြေခံဥပဒေထဲမှာတောင် ခည့်သွင်းပြဌာန်းပြီး (၁၀) စုနှစ်တိုင်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တက်ခဲ့တဲ့ အစိုးရကလည်း ကိန်းဂဏန်းလမ်လည်မှုမှာ ပြိုင်စံရှားတာ မို့ မောင်မိုးညိုတို့မြန်မာတွေဟာ စာရင်းကိန်းဂဏန်းများရဲ့ အသက်သွေးကြောတမျှ အရေးပါမှုကို အယုံအကြည်မဲ့တဲ့ စရိုက်ကအသွေူအသားထဲစွဲနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လည်း အမေရိကားမှာလုပ်တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှာ ချိုင်းနိစ်၊အင်းဒီယား စတာတွေနဲ့ ကိစ္စပြီးစာရင်းရှင်းကြလို့၊ မြန်မာ ဆိုတဲ့ လူမျိုးစုကြီးဟာ ကိန်းဂဏန်းအတိအကျထွက်လာရမဲ့အစား၊ “တိုးတိုးသား” ဘ၀ ကိုရောက်မှန်းမသိရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် (ကြီးစွာဖြင့်) ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။
သန်းကောင်စာရင်းဆိုတာ ခေါင်းပေါ်က သန်းအကောင်ရေ စာရင်းကိုပြောတာပါ။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့သူမြို့သား ရွှေမြန်မာတွေ ခေါင်းနေ့စဉ်လျှော်လို့ ခေါင်းမှာ သန်းမရှိကြတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ကြောင်ကြီးမှာတော့ ခေါင်းတင်မက တကိုယ်လုံးမှာ သန်းတွေရှိတယ်။
သက္ကရာဇ် (၂၀၂၀) မှာ နောက်ထပ်ကောက်မဲ့သန်းခေါင်စာရင်းအတွက်၊ မြန်မာလူထုတရပ်လုံးကို ခုကတည်းက advocate လုပ်ဘို့လိုနေပါပြီး။ MG နဲ့ တကွ ရာပေါင်းများစွာသော၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ကြီးများကို နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ လက်ေ၇တပြင်စည်းလုပ်ရမဲ့အချိန်ကျနေပါပြီ။ မြန်မာ community ကိုဘယ်လိုအသိပေးမလဲ။ ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အစီအမံတွေ (ရေရှည်အစီအမံတွေ) စဘို့အချိန်ကျပါပြီ။
၂၀၀၇ ကစပြီး ၂၀၀၉ အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကို ပြောင်းရွှေ့ခိုလှုံလာသူ refugee တွေထဲမှာ Iraqi ပြီးရင် မြန်မာတွေ က ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။ (Iraqi က25%မြန်မာက 24% ရှိပါတယ်)
နောက်တခါသမိုင်းတပါတ်အလည်ခံလို့မရတော့ပါဘူး။ ခုတင်ဘဲ နောက်ဆယ်နှစ်သွားပြန်ပြီဆိုတာသတိပြုကြပါဗျာတို့။
သဂျီးမင်း ပြောပြောနေတဲ့ အဲ့ဒီ (ဒါပေမဲ့.. မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးအကျယ် လူမျိုးခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုဒဏ်ရာတွေကြောင့်..) ကေစ့်ကိုလုံးဝမသိဘူး
သမိုင်းရှိရင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျနော့် Mail ထဲပို့ပေးပါလား ဗျာ……..
ငါးထောင်ကျော် ဆိုတာလဲ တစ်ကယ်တော့ မနဲပါဘူး
သန်းခေါင် စာရင်း ဆိုတာ… ညဉ့်နက် သန်းခေါင် မှာ စစ်တဲ့ စာရင်းမို့ သန်းခေါင် စာရင်းလို့ ခေါ်ပါတယ် လို့ ကြားဖူးတာပဲ။
သူကြီးသည် အမေရိကား၌ နေထိုင်သည်မှာကြာမြင့်သည့်အတွက် သန်းကောင်နဲ့သန်းခေါင် လေးမှားတာကိုခွင့်ပေးကြပါကွယ်။
သန်းခေါင် စာရင်စစ်တာကလည်း ညသန်းခေါင်မှာ စစ်တာလေကွယ်..။ နေ့ခင်းစစ်မရပါဘူး..။ ဒီတော့ ညလုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေ နေ့ခင်းမှာလုပ်..။ သန်းခေါင်စာရင်းအစစ်မခံရတော့ဘူး…။ ဟူးးးးး ပြောရတာမောလိုက်တာ …။ ချာတူးရေ ဘီယာတစ်ခွက်လောက် လှမ်းလိုက်စမ်းပါ……….
သူကြီး ၂လုံးနံပါတ်ပေးနေတယ်။ ၅၂ နဲ့ ၅၄ တဲ့။ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ တနှစ်ကို ဘယ်နှစ်ယောက်တိုးလာလဲသူကြီး။ စီတီဇင် ရော ဂရင်းကဒ်ရောလား။
သင်္ကြန်ပွဲတပွဲမှာတောင်..( လူအများဆုံးနှစ်မှာ) လူ ၄ထောင်ကျော်လာတာမို့ ..
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ မြန်မာ့ရိုးရာပွဲမို့ လူစုံတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။